Semalt को साथ बट्स पत्ता लगाउने र ब्लक गर्ने
इन्टरनेटमा तपाईंको ध्यान चाहिने सब भन्दा महत्त्वपूर्ण चीजहरू मध्ये एक तपाईंको सुरक्षा र सुरक्षा हो। राज्य प्रायोजित गोपनीयता आक्रमण बारे याहूको चिन्ता, GCHQ र NSA को मुद्दा, साथै राज्य द्वारा प्रायोजित ह्याकि cases मुद्दाहरूको रूपमा ठूलो संख्यामा सुरक्षा उल्ल of्घनहरूको कारण, हामीले सुरक्षालाई गम्भीरताका साथ लिनु आवश्यक छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामी हाम्रो अनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सही समयमा सही चीजहरूको आशा र योजना बनाउँदछौं। हामीले यो बिर्सनु हुँदैन कि हामी यस्तो संसारमा बाँचिरहेका छौं जहाँ चीजहरू प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छन् र केही सेकेन्डमा ह्याक गर्न सकिन्छ। खराब गतिविधिहरू हाम्रो जीवनको साझा हिस्सा भएको छ, र हामीले बाह्य शक्तिहरूबाट आफ्नो सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। यहाँ, रस बार्बर, Semalt ग्राहक सफलता प्रबन्धक, तपाईंलाई कसरी खराब बट्स पत्ता लगाउने र रोक्नको बारेमा बताउन गइरहेको छ।
Bad Bots के हो?
त्यहाँ दुई प्रकारका बोटहरू छन्: राम्रो बट्स र खराब बट्स। यो भन्नु गलत हुनेछैन कि राम्रो बट्सले तपाईंको वेबसाइटलाई हानी गर्दैन, तर नराम्रा बोटहरूले जहिले समस्याहरू सिर्जना गर्दछ। बोटको केही फाइदाहरू यो हुन् कि ती खोज ईन्जिनमा गुगल, याहू, र बिंग सहित तपाईंको वेबसाइट रैंकिंग सुधार गर्दछ। साथै, ती हामीलाई उपयोगी सेवाहरू प्रदान गर्दछ किनकि यसले हाम्रो सामग्रीहरू इन्टरनेटमा धेरै व्यक्तिलाई यसको कुञ्जीशब्दहरू र खोज इञ्जिन क्वेरीहरूमा आधारित बनाउँदछन्। जहाँसम्म, खराब बट्सले तपाईंको वेबसाइटलाई ठूलो हदसम्म क्षति पुर्‍याउन सक्छ। तिनीहरू बिभिन्न तरिकाहरूमा प्रयोग हुन्छन्, र हेकरहरू वेबसाइटका लागि स्क्र्याप सूचनाहरू जुन तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरू द्वारा प्रयोग गर्ने सम्भावना हुन्छ। यसका साथै नराम्रा बट्सले वितरित इन्कार-अफ-सेवा हमलाहरू सिर्जना गर्दछ र तपाईंको वेब सामग्री चोर्न वा पुन: पोस्ट गर्न सक्दछ, यसको प्रतिलिपिहरू इन्टरनेटमा सिर्जना गरेर। खोज इंजन ट्राफिक फुलाउने खराब बुट्सको परिणाम हो, प्रभाव पार्छ र तपाईंको वेबसाइटको मेट्रिक्सलाई विकृत गर्दछ। खराब बट्सले तपाईंको वेबसाइट ट्राफिक बढाउन सक्छ, तर लोडिंग गति र बाउन्स रेट पनि बढ्छ। बोटको प्रकार जस्तोसुकै भए पनि, तपाईले ती दुबैबाट छुटकारा पाउनु पर्छ तपाईको ईन्टरनेटमा नष्ट हुने जोखिमहरूलाई कम गर्न।
तपाईं तिनीहरूलाई कसरी चिन्न र रोक्न सक्नुहुन्छ?
तपाईं मिल्दो प्लगइनहरू, उपकरणहरूको साथ साथै विस्तारहरू स्थापना गरेर दुबै राम्रा र खराब बट्सहरू पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले होस्टिंग र समाधान प्रदायकहरूमा भर पर्नुपर्दछ र उनीहरूबाट छुटकारा पाउनको लागि सक्रिय मार्गहरू खोज्नु पर्छ। तपाइँले केहि गर्नुभन्दा पहिले, तपाईले बाट राम्रो छ वा खराब छ वा मिनेट भित्र यसलाई कसरी रोक्ने भनेर मूल्या to्कन गर्न सेटअप स्थापना गर्नुपर्नेछ। सीएमएसवायरले दिएको एक रिपोर्टले पत्ता लगायो कि यसको ev० प्रतिशत भन्दा बढि चोरी सम्बन्धी प्रविधिहरू जस्तै IP ठेगानाहरू र कम आवृत्ति घुमाउने तरिकाले हटाउन सकिन्छ।
बट्सबाट छुटकारा पाउनको एउटा सब भन्दा सजिलो तरीका भनेको सबै बट्सको आईपी ठेगानाहरूलाई रोक्नु हो, चाहे तिनीहरू राम्रो होस् वा नराम्रो। तपाईंले कुनै कार्य गर्नु अघि बोटको प्रकार अवलोकन गर्नुपर्नेछ। वेब सर्वर निर्देशिका तिनीहरूलाई ब्लक गर्न को लागी प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईले आफ्नो अवलोकन र मूल्या on्कनको आधारमा धेरै आईपी ठेगानाहरूलाई रोक्न सक्नुहुन्छ। केवल यकिन गर्नुहोस् कि तपाई मानवको आईपी ठेगाना रोक्नुहुन्न किनकि यसले इन्टरनेटमा तपाईको साइटको प्रतिष्ठा बिगार्न सक्छ।